China 330w Monocrystalline Black Solar Panel ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ - Rixing Electronics
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ စိတ်ကြိုက် 330w Monocrystalline Black Solar Panel ကို လက်ကားဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့် 330w Monocrystalline Black Solar Panel ကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျှော့စျေး ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
330w Monocrystalline Black Solar Panel ခေါင်မိုးပေါ်အတွက် အနက်ရောင် အပြည့်ပါသော အားသာချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Full Black ဆိုလာပြားများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ အမိုးတပ်ဆင်မှုအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်၊ ဆန်းကြယ်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ မင်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်။
module များ၏အရွယ်အစား: 1665*1002*40mm
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 310 315 320 325 330
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 32.64 32.83 33.02 33.21 33.44
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 9.5 9.59 9.69 9.78 9.86
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 39.8 40.01 40.22 40.43 40.65
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 10.06 10.15 10.25 10.35 10.43
Module E ciency Eff % 18.58 18.88 19.18 19.48 19.78
3. အပြိုင်အဆိုင် အလင်းအားနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်
4. လျှော့ချ BOS နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ROI ဖြင့် အသုံးဝင်မှုနှင့် စီးပွားဖြစ်စကေးပရောဂျက်များအတွက် စံပြရွေးချယ်မှု
330W Monocrystalline အနက်ရောင် ဆိုလာပြားကို အိမ်ခေါင်မိုး၊ ခြံ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အဦ၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
330w Monocrystalline Black Solar Panel တွင် ဤအင်္ဂါရပ်များ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 330W Monocrystalline အနက်ရောင် ဆိုလာပြား၏ လက်မှတ်။
hot Tags:: 330w Monocrystalline အနက်ရောင် ဆိုလာပြား၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ ရောင်းအားကောင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်၊ လိုင်းပိတ်၊ ဂရစ်ဒ်ပေါ်မှ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ , In Stock , Brands , Made in China , Price List , CE , 25 Years Warranty